Music – Page 6 – The Ulwazi Programme
USipho Gumede wazalwa zingu-17 Aphreli 1952. Wazalelwa endaweni yase Cator Manor kusayindawo yamaNdiya kuphela eThekwini. Waba nothando lomculo esangumfanyana edlala isiginci sokuzakhela kanye nomtshingo (penny whistle) nabangani bakhe. Basuswa endaweni yase Cator Manor nguhulumeni wobadlululo, eseminyaka engu-12 wayesehlala endaweni eyamakhaya ngaphandle kwaseMlazi. Ngesikhathi ehlala kulendawo wafunda okuningi ngomculo nangokwehlukana kwawo efunda emishandweni nasemingcwabeni. Wayechitha iskhathi … Read more
Ukufihlwa kuka Majotha Zungu
Lifihliwe iqhawe lomculo kaMaskandi uMajotha Zungu ebesibekelwe ukuthi selidlulile emhlabeni ngenxa yokugula obekumphethe. Lensizwa ifihlelwe ekhaya endaweni yakwaMaphumulo Oyengo. Nalapho umgcwabo ubugcwele phama abantu bengangizimpethu zendllovu bezovalelisa lensizwa ebidume kakhulu ngephimbo layo. Lensizwa ifihlwa nje bekuphume isicelo sikhishwa izinsizwa ebezibambe naye indima kulomculo zicela ukuba uMasipala wangakubo ungenelele ekufihlweni kwakhe ngoba bebonelela ukuthi lomgcwabo uzobe … Read more
Categories Music, People Tags Majotha Zungu
Sekuyizo lezonsuku mthandi kaMaskandi zokuthi amaciko acikoze asilethele ukudla kwendlebe njengoba kuyilenyanga nje kaMeyi. Ezisematheni nje manje ukuphuma kwecwecwe lika Dubula Sodubulana uDr Khangelani Mhlongo owaziwa ngelika DSD kuyo lendima yomculo wesintu. Lensizwa isimnkantshubomvu emculweni kaMaskandi njengoba isineminyaka edlula ishumi nanhlanu ikule ndima . Maningi namava akhe asewabekile kuyo lendima, ingakho ke nje kungamangazi nokuthi … Read more
USmiso Zwane odume ngelika Okmalumkootkat, wazalwa mhlaka 27 Julayi 1983 elokishini laseMlazi, eThekwini. Unguculi we-rap, abe ngumbhali wamaculo, abe wumdansi wezitayela aphinde abe yilungu neqembu lababili i-Dity Paraffin esebenzisana noZamani Xolo odume ngelika noDokta Spizee. Ngemuva kokuphothula iziqhu zakhe ze-Art Design eVega School of Communication, wabhekisa amabombo eGoli ukuveza ithalente lakhe. Egoli ilapho ahlangana khona … Read more